iOS ဖုန်းတွေအတွက် တကယ့်ကို အသုံးဝင်မယ့် မြန်မာနှစ်တစ်ထောင် ပြက္ခဒိန် MyCal – Myanmar Calender – AsiaApps
သူငယ်ချင်းတို့ရေ…. နှစ်ဟောင်း ၂၀၁၈ ကြီးကို အပြီးအပိုင် နှုတ်ဆက်ပြီး နှစ်သစ် ၂၀၁၉ ကြီးဆီကို ရောက်ရှိလို့လာပါပြီနော်။ အဲ့တော့ နှစ်သစ် ၂၀၁၉ ရဲ့ အခါကြီးရက်ကြီး ရုံးပိတ်ရက်တွေကို ကြည့်နိုင်မယ့် ပြက္ခဒိန်တစ်ခု ဝယ်ထားပြီးပြီလား??? မဝယ်ရသေးရင်လည်း စိတ်မပူပါနဲ့နော်။ ကိုယ်သွားတဲ့နေရာကို အမြဲတမ်း ကိုယ်နဲ့မကွာ ဆောင်သွားလို့ရမယ့် app လေး ရှိနေပါပြီ။ App လေးရဲ့နာမည်ကတော့ Mycal ဖြစ်ပါတယ်။ သူက App store တစ်ခုတည်းမှာပဲရတဲ့အတွက် Android တွေ သုံးလို့မရသေးပါဘူး။ Mycal လို့ပဲရိုက်ပြီးရှာရင်နာမည်တူတွေနဲ့ မှားနိုင်တာကြောင့် အောက်မှာ ဒေါင်းလုတ်လင့်လေး တစ်ခါတည်းပေးထားပါတယ်။ စိတ်ဝင်စားရင် တစ်ခါတည်း ဒေါင်းလုတ်လုပ်သွားလို့ရပါတယ်နော်။
Mycal ကို ဖန်တီးတဲ့သူက မြန်မာနိုင်ငံကပဲ ဖြစ်တာကြောင့် ပြက္ခဒိန် app လေးထဲမှာ မြန်မာစာသားတွေနဲ့ တွေ့ရမှာပါ။ အဲ့တာတင်မကသေးပါဘူး။ နေ့စွဲတွေကို မြန်မာရက် အင်္ဂလိပ်ရက် နှစ်မျိုးစလုံးနဲ့ ပြပေးမှာဖြစ်တာကြောင့် သုံးရတာတော့ လုံးဝအဆင်ပြေပါတယ်။ နှစ်အသစ်အတွက် data update ကိုလည်း ပြုလုပ်ပေးဖို့မလိုတာကြောင့် အခု ၂၀၁၉ ခုနှစ်အတွက်တင်မက လာမယ့် ၂၀၂၀ ၂၀၂၁ ခုနှစ်တွေကိုလည်း ကြည့်လို့ရပါတယ်။ ရက်ရာဇာ၊ ပြဿဒါး နဂါးခေါင်း အလှည့်အပြောင်းတွေကိုလည်း ထည့်သွင်းဖော်ပြပေးထားလို့ ရက်ကိုကြည့်ပြီး အလုပ်လုပ်တတ်တဲ့သူတွေအတွက် တကယ့်ကို အသုံးဝင်ပါတယ်။
ဖိုင်အရွယ်အစားက သိပ်ပြီးမကြီးတဲ့အပြင် ဒေါင်းလုတ်လုပ်ခကလည်း အခမဲ့ဖြစ်တာကြောင့် အကယ်၍ သင့်ရဲ့ iPhone မှာ မြန်မာ ပြက္ခဒိန်မရှိသေးရင် သုံးကြည့်ဖို့ မိတ်ဆက်ပေးလိုက်ပါတယ်နော်။ တိကျသေချာတဲ့ နေ့စွဲတွေနဲ့ ပျော်ရွှင်စရာနှစ်သစ်ကို ပိုင်ဆိုင်နိုင်ပါစေလို့လဲ မင်မင်က Asiaapps ကနေတစ်ဆင့် ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်။ ??)